တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန် H.E. Mr. Vijay Gokhale အားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန် H.E. Mr. Vijay Gokhale အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၂၂
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန် H.E. Mr. Vijay Gokhale အားယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri နှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် တပ်မတော်နှစ်ရပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မုန်တိုင်းအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖလှယ်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်သူများမှရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်လျှောက်လှမ်းနေမှုအခြေအနေများနှင့် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသမှ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ ပြန်လည်နေထိုင်ရန် အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ အားရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေး အတွင်းဝန်တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ အောကျတိုဘာ ၂၂
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ အိန်ဒိယနိုငျငံခွားရေး အတှငျးဝနျ H.E. Mr. Vijay Gokhale အားယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျ ရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး အိန်ဒိယ နိုငျငံခွားရေးအတှငျးဝနျနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Vikram Misri နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျ ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးတိုး တကျရေးအတှကျ တပျမတျောနှဈရပျပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ အိန်ဒိယသမုဒ်ဒရာနှငျ့ ဒသေတှငျးလုံခွုံရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ မုနျတိုငျးအန်တရာယျနှငျ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျ ကွိုတငျ ကာကှယျရေးဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျမြား ဖလှယျရေးကိစ်စရပျမြား၊ လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာ အပွနျအလှနျပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု ကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျပွညျသူမြားမှရှေးခယျြသညျ့ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ လမျးကွောငျးပျေါတှငျလြှောကျလှမျးနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိအောငျ ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောဒသေမှ တဈဖကျနိုငျငံသို့ထှကျခှာသှားသညျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြား ပွနျလညျနထေိုငျရနျ အတှကျ အိန်ဒိယနိုငျငံမှ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား အားရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံခွားရေး အတှငျးဝနျတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျပွီး စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး Colonel General Alexender Vasilievich Fomin အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်တွင်လိုအပ်နေသည့် နည်းပညာနှင့် လူသားစွမ်းရည်အရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူများဆိုသည့် ပညာရေးစတုဂံအား ကောင်းရန်လို၊ ပညာရေးစနစ်များ မည်သို့ပင်ပြောင်းလဲသင်ကြားသည်ဖြစ်စေ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အတန်းလိုက်ပညာရပ်များအား အမှန်တကယ်တတ်မြောက် ကြရန်လို
ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အန်ရွှမ်းမြို့သို့ရောက်ရှိလေ့လာ၊ အမြန်ရထားစီးနင်းလိုက်ပါပြီး ကွေ့ယန်း မြို့သို့ရောက်ရှိ
ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ Admin 0